कसरी धातु मुद्रांकन को लागी सर्वश्रेष्ठ कच्चा माल छनौट गर्न - समाचार - शेन्ज़ेन Minzim हार्डवेयर कं, लिमिटेड।
धातुको पार्ट्स, कम्पोनेन्टहरू, र उत्पादहरूको माग बढ्दै जाँदा उच्च गति, भरपर्दो निर्माण विधिहरूको आवश्यकता पर्दछ जसले जटिल धातु डिजाइनहरूको प्रतिकृति उत्पादन गर्न सक्दछ। यस मागको कारण,धातु मुद्रांकनआज संसारमा सबैभन्दा बहुमुखी र लोकप्रिय उत्पादन प्रक्रिया मध्ये एक भएको छ।
डिजाइनरहरू र ईन्जिनियरहरूको लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने धातुहरूको बारेमा कुञ्जी जानकारी जान्नको लागि यो महत्त्वपूर्ण छधातु मुद्रांकनprocesses सामग्री चयन प्रक्रिया सूचित गर्न। प्रत्येक धातु र मिश्रमा फरक फरक सुविधाहरू हुन्छन्। भागको प्रकृति र अनुप्रयोगमा निर्भर गर्दै, यसलाई कि त सामान्य मिश्र वा विशेष धातु आवश्यक पर्दछ।
धातु मुद्रांकनका लागि उत्तम कच्चा माल छनौट गर्दै, धातु मुद्रांकनमा सामान्यतया प्रयोग हुने कच्चा मालका विभिन्न प्रकार छन्। अनुप्रयोग आफैंले सामान्यतया कुन धातु स्ट्याम्प गर्न सकिन्छ भनेर निर्धारण गर्दछ। मुद्रांकनमा प्रयोग हुने धातुहरूका मुख्य कारकहरू:
१. मुद्रांकन सामग्रीको सामान्य प्रकार
सामान्यतया धातु शीटहरू कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, तामा र यसको मिश्र, आदि हुन्। तिनीहरूसँग कम विरूपण प्रतिरोध छ र चिसो मुद्रांकन प्रक्रियाको लागि उपयुक्त छ।
a कपर र एल्युमिनियम र तिनीहरूको मिश्र प्राय: बिजुली उपकरणको कम्पोनेन्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ किनभने उनीहरूको राम्रो लचकता र उत्कृष्ट विद्युतीय चालकता।
b कार्बन स्टील र स्टेनलेस स्टील प्राय: उपकरणको खाका, भाग, केसहरू, इत्यादिको लागि प्रयोग गरिन्छ, तर तिनीहरूको उच्च कठोरताको कारण सामान्यतया स्ट्याम्पि oil तेल प्रक्रिया सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
२ स्ट्याम्पि materials सामग्रीको विचार
त्यहाँ तीन मुख्य मुद्रांकन प्रक्रियाहरू छन्: खाली, झुकाउने र रेखाचित्र। प्लेटहरूको लागि बिभिन्न प्रक्रियाहरूको बिभिन्न आवश्यकताहरू हुन्छन्, र सामग्रीहरूको चयन भागहरूको सामान्य आकार र प्रशोधन प्रक्रियाको आधारमा विचार गर्नुपर्दछ।
a पंचि requiresलाई आवश्यक हुन्छ कि पञ्चिंगमा प्लेट क्र्याक हुँदैन भनेर पक्का गर्नको लागि प्लेटमा पर्याप्त प्लास्टिकसिटी हुनुपर्दछ। नरम सामग्रीको राम्रो प्रसंस्करण प्रदर्शन छ, जसले चिकनी क्रस-सेक्शन र सानो झुकावको साथ भागहरू प्राप्त गर्न सक्दछ। पंचिंग पछि हार्ड सामग्रीको गुणस्तर राम्रो छैन, र सेक्सनको असमानता ठूलो छ, विशेष गरी मोटो प्लेट सामग्रीको लागि गम्भीर। भंगुर सामग्रीहरूको लागि, ती मुक्का पछि च्यात्ने प्रवण हुन्छ, विशेष गरी जब चौडाइ एकदम सानो हुन्छ।
b यदि प्लेटलाई झुकाउन आवश्यक छ भने, पर्याप्त प्लास्टिकिटी हुनुपर्दछ, कम उपज सीमा। धातु पानाको झुकावको उच्च प्लास्टिसिटी क्र्याक गर्न सजिलो छैन, कम उत्पादन सीमा र प्लेटको लोचको कम मोड्युलस, झुकाव पछि रिवाउन्ड विरूपण सानो छ, झुकने आकारको वास्तविक आकार प्राप्त गर्न सजिलो छ। भंगुर सामग्रीको लागि, झुम्कासँग तुलनात्मक रूपमा ठूलो मोड्ने त्रिज्या हुनुपर्दछ, अन्यथा क्र्याक गर्न सजिलो छ।
c पाना धातु ड्राइंग, विशेष गरीगहिरो रेखाचित्र, अधिक गाह्रो पाना धातु प्रसंस्करण टेक्नोलोजी मध्ये एक हो। सम्भव भएसम्म सानो रेखाचित्रको गहिराइ मात्र चाहिन्छ, आकार यथासम्भव सरल छ, र सम्भव भएसम्म सजिलो संक्रमण पनि आवश्यक पर्दछ, तर राम्रो प्लास्टिकसिटी पनि चाहिन्छ, वा अन्यथा यो भागको समग्र विकृति र विकृति पैदा गर्न धेरै सजिलो छ। , स्थानीय झिम्काउने, र तान्ने र क्र्याकिंग पनि।
Stamp. स्ट्याम्पिंग सामग्री को तर्कसंगत चयन
स्ट्याम्पिंग सामग्री को छनोट मा मुद्रांकन भाग को आवश्यकताहरु, मुद्रांकन प्रक्रिया को आवश्यकताहरु र लागत लाई ध्यानमा राख्नु पर्छ।
a भागहरु स्ट्याम्पिंग को आवश्यकताहरु को अधीनमा रहनुहोस्
चयनित सामग्रीले स्ट्याम्पिंग भागलाई निश्चित सेवा जीवनको साथ ठीकसँग काम गर्न सक्षम पार्दछ। यस उद्देश्यका लागि, यसले स्ट्याम्पिंग पार्ट्सको उपयोग सर्तको आधारमा बल, कठोरता, कठोरता, जंग प्रतिरोध र तातो प्रतिरोधको आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्दछ।
b मुद्रांकन प्रक्रियाको आवश्यकताहरूको अधीनमा रहनुहोस्
कुनै पनि प्रकारको स्ट्याम्पिंग भागहरूका लागि, चयन गरिएको सामग्री स्ट्याम्पिंग प्रक्रियाको आवश्यकता अनुसार क्र्याकिंग वा झिम्का बिना स्थिर र योग्य उत्पादनहरू बनाउन सक्षम हुनुपर्दछ, जुन सामग्री चयनको सबैभन्दा आधारभूत र महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो।
c लागत प्रभावी आवश्यकताहरूको अधीनमा हुनुहोस्
प्रदर्शन सामग्री र स्ट्याम्पिंग प्रक्रियाको आवश्यकताहरू पूरा गर्दा चयन गरिएको सामग्री, मुद्रांकन लागत कम गर्न सस्तो, सुविधाजनक र किफायती हुनुपर्छ।
माथिको को लागी कच्चा माल छान्ने विधि छमुद्रांकन भागहरु। कच्चा मालको उचित चयनले वर्कपीसको गुणस्तरलाई प्रभावकारी रूपमा सुधार गर्न सक्छ। मिन्जिम टोलीसँग थप विवरणहरू छलफल गर्न स्वागत छ।
अघिल्लो:कसरी पाना धातु निर्माण को लागत लागत गणना गर्न?
अर्को:पाना धातु वेल्डिंग दिशानिर्देशहरू